La Bonne vie Scenic Rim / Boonah - I-Airbnb
ILa Bonne Vie yireplica entle yaseQueenslander ehombise iProvinciale yaseFransi, emi kumazantsi eNtaba yeNqaba, enembono entle yeentaba kunye nentlambo. Ii-pubs zelizwe , iindawo zokutyela kunye neendawo zewayini zalapha ekhaya kukumgama omfutshane.
Iimbono ezimangalisayo zeentaba ngoxolo noxolo. Ikhitshi exhotyiswe kakuhle kakhulu kwaye ifakwe kubunewunewu kwisitayile sePhondo saseFransi. Indawo yomlilo yerhasi yangaphakathi ngeengokuhlwa ezibandayo zasebusika kunye nomngxuma womlilo ongaphandle weBon imililo/ ukuqhotsa iimarshmallows. Ichibi lokutsala izilwanyana zasendle, kubandakanya iikhangaru ezihlala rhoqo, ezihlala zindwendwela.
Ifakwe kungqameko lwe-Scenic, lo mhlaba umi kwiihektare ezili-10 zomhlaba otyholwa ngokusondeleyo kwiiPaki zeSizwe. Kwindlela emfutshane yokuqhuba, kukho iikhefi, ii-pubs, iivenkile zekofu, indawo yokubhaka, iivenkile zamandulo, iivenkile zewayini kunye nobugcisa kunye neendawo zokuthengisela. Iidolophu zengingqi yiAratula, Kalbar, Boonah.
Ukusebenzisana neendwendwe nge-imeyile okanye ngefowuni kwaye sinikezela ngeenkcukacha malunga nendlela yokufikelela izitshixo zepropati kunye nemiyalelo epheleleyo yepropati.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tarome